कौरवपथमा कांग्रेस-एमाले	| BIVAS
← उत्तरी गोरखामा खाद्यान्न अभाव
वनेरी प्रथाका कारण लोपोन्मुख चेपाङ जाति मर्कामा →
– दिल साहानी
देशले यतिबेला दलहरूबीच एकता, सहमति र सहकार्यको माग गरेको छ । राज्यको पुनर्संरचना, संविधानको लेखन तथा शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्ने यस घडीमा सबै राजनीतिक दलहरूबीच र खासगरी ठूला राजनीतिक दल एमाओवादी, एमाले र कांग्रेसबीच एकता, सहमति र सहकार्य हुनु जरुरी छ । कुरो यस्तो भए पनि अठार दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा राष्ट्रपतिले कटवालका ’boutका उठाएको प्रतिगामी कदमले मुलुकलाई नागरिक सर्वोच्चताको बाटोतिर होइन कि सैनिक सर्वोच्चताको बाटोतिर धकेलेको छ । यदि राष्ट्रपतिको कदमलाई बेलामा नै सच्चाइएन भने माओवादीले बाध्य भएर संघर्षको बाटो लिनुपर्ने छ । जनविद्रोहको बाटो लिनुपर्ने छ । संघर्ष शान्तिपूर्ण नै हुने । सदन मूलतः सडक र सदनमा केन्द्रित हुनेछ । माओवादीको जनविद्रोहको अन्तिम परिणाम नयाँ नेपालको लागि स्वागतयोग्य भए पनि यसले मुलुकमा हाललाई नेपाली जनताको शान्तिको चाहनामाथि ठेस पुर्‍याउने छ । यो कुरा एमाओवादीलाई थाहा छ । तर लिकबाट हटेको मुलुकको राजनीतिलाई फेरि लिकमा ल्याउन जनआन्दोलन अपरिहार्य भएको छ ।
माओवादीले अवरुद्ध संसद्लाई खुलाउँदै सरकारलाई राष्ट्रपतिको कदम’bout आवश्यक निर्णय गर्न वा त्यस’bout कुनै समाधान खोज्न एक महिनाको समय अवधि दिएको थियो । यो समाप्त हुन थालेको छ । अझसम्म सरकार कानमा तेल हालेर बसेको हुनाले पनि यस ’boutमा सरकारले कुनै आवश्यक कदम चाल्नसक्ने अवस्था रहेको छैन । त्यसको अर्थ के हो भने अब माओवादीले बाध्य भएर सदन र सडक आन्दोलन तेज पार्नुपर्नेछ । निश्चित रूपले आन्दोलन जति शान्तिपूर्ण भए पनि त्यसले मुठभेडको अवस्था पनि ल्याउन सक्ने छ । माओवादीहरूको यस अवस्थालाई पाण्डवले कौरवसित संभावित युद्ध रोक्नलाई राज्य नमागेर मात्र पाँच गाउँ मागेका थिए । तर कुबुद्धि र अहंकारले ग्रसित कौरवहरूले पाँच गाउँका त के कुरा एक सियोको टुप्पो जति जमिन पनि पाण्डवलाई दिन मानेनन् । परिणाम महाभारतको युद्ध र कौरवहरूको विनाश हामी सबैले जाने बुझेको कुरा हो । यतिबेला एमाले र कांग्रेस कौरवपथमा लागेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारसित माओवादीले कुनै पहाड पल्टाउने माग राखेका छैनन् । उनीहरूले केवल राष्ट्रपतिका कदमका ’boutमा संसद्मा बहस चाहेका छन् । तर मुख्यत कांग्रेसले राष्ट्रपतिको कदम’bout संसद्मा एक शब्द पनि बोल्न नपाइने अडान लिएको छ । उसले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक राजतन्त्रको अवस्थामा होइन कि निरंकुश राजतन्त्रको दर्जामा राखेको छ । राष्ट्रपतिको ’boutमा सदनमा बोल्न पाइन्न भन्ने उर्दी जाहेर गरेको छ । यही नै कांग्रेसको असली चरित्र सर्वसत्तावाद, नव राजतन्त्रवाद, ज्ञानेन्द्रवाद हो। यदि राष्ट्रपतिको कदमको ’boutमा संसद्मा बोल्न पनि पाइन्न भने त्यस्तो संसद् हामीलाई किन चाहियो ? यदि राष्ट्रपतिको ’boutमा संसद्मा बोल्न पाइन्न भने हामीलाई किन लोकतन्त्र चाहियो ? किन गणतन्त्र चाहियो ? नेपाली जनतालाई निरंकुश राजतन्त्र नै प्यारो लाग्दथ्यो भने किन चाहिन्थ्यो यो मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ? उही अढाइ सय वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र नै पर्याप्त थियो । अर्को कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको राजतन्त्र किन चाहिन्थ्यो, नव राजतन्त्र किन चाहिन्थ्यो ?
अंग्रेजीका प्रख्यात लेखक ईएम फोस्टरले आफ्नो एक लेखमा भनेका छन्- उनलाई संसद् किन मन पर्छ भने त्यहाँ बोल्न पाइन्छ, गफ गर्न पाइन्छ तर हामी के देखिरहेका छौं भने यो कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले कब्जा गरेको संसद्मा त बोल्न पनि पाइन्न र गफ गर्न पनि पाइन्न । राष्ट्रपतिले ठीक गरे भन्न पनि पाइन्न र राष्ट्रपतिले बेठीक गरे भन्न पनि पाइन्न । यस्तो संसद्को के काम ? ताला लगाएर राखे पनि भयो ।
जनादेशअनुसार माओवादीको नेतृत्वमा संयुक्त वा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्ने थियो । त्यसमा कांग्रेस सामेल भएन । यही विन्दुबाट नै माओवादी-कांग्रेस एकता सहमति र सहकार्यको राजनीतिबाट अलग्गिएको कुरा चाल पाउँछौं । कांग्रेसको मुख्य उद्देश्य नै जसरी हुन्छ माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई कमजोर बनाउनु, ढलाउनु र देश र दुनियाँलाई के सन्देश दिनु थियो भने माओवादीले सरकार चलाउन सक्दैन । यस मामिलामा कटवाल प्रकरणले कांग्रेसलाई माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढलाउने परिस्थिति सिर्जना गर्न मद्दत गर्‍यो । माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढलाएर कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार बनाउने मामिलामा भारतले के कस्तो भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा कसैको आँखाबाट छिपेको छैन। जे होस कांग्रेसले वामपन्थीहरूको विरुद्धमा वामपन्थीलाई नै उचालेर माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढलाउने मामिलामा मात्र होइन आफूलाई समेत सरकारमा सामेल गराउनमा निकै ठूलो सफलता प्राप्त गर्‍यो। यद्यपि कांग्रेसको यो सफलता अन्ततः उसको निम्ति आत्मघाती कुरो बन्न जाने ठूलो संभावना पनि छ ।
माओवादीले उठाइरहेको नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा दुरगामी महत्वको छ । राष्ट्रपतिले चालेको कदम एकप्रकारले पश्चगामी कदम हो । यो राजा महेन्द्रले ०१७ सालमा वा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १८ गते र माघ १९ गते उठाएको जस्तो प्रतिगामी कदम हो। यस्तो कदम हिजो राजाले सैनिकको बलमा पूरा गर्दथे भने आज कांग्रेस र एमालेले पनि सैनिककै बलमा पूरा गरेका छन्। यसैले मुलुकमा नागरिक सर्वौच्चता धरापमा परेको अवस्था छ। यदि राष्ट्रपतिको प्रतिगामी कदमलाई बेलामा नै सच्चाइएन भने त्यसले दलहरूको खासगरी तीन ठूला दलहरूको बीचमा निकै ठूलो दरार खडा गरिदिने छ । दरार खडा गरिसकेको पनि छ । यसको अर्थ के हुन्छ भने मुलुकमा न त शान्तिप्रकिया कुनै तार्किक निष्कर्षमा पुग्नसक्छ न तोकिएको समयमा संविधान नै लेखिने छ । हुन त यो असफलता वर्तमान कठपुतली सरकारको अफलता हुने छ । तर पनि यो असफलता माओवादीको पनि असफलता किन हुनेछ भने यसले यति ठूलो दल भएर पनि र जनताको यति धेरै समर्थन प्राप्त गर्दा पनि प्रतिपक्षको रूपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन। यसैले पनि यस अवस्थामा एमाओवादी कोखिलामा हात राखेर बस्दैन। यसले मुलुकको गलत धार समातेको राजनीतिलाई सही धारमा ल्याउन पनि आन्दोलनको बाटो समात्नु आवश्यक हुन्छ। आन्दोलनको तयारीमा ऊ लागिसकेको पनि छ।
यसको यही अर्थ हुन्छ अब मुलुक फेरि जनआन्दोलनको दिशातिर अघि बढ्ने छ । यस जनआन्दोलनको नेतृत्वमा माओवादीले नै गर्नेछ। तर यसलाई साथ सबै देशभक्त तथा जनवादी शक्तिले नै दिने छन्। सच्चा राष्ट्रवादी शक्तिले नै दिनेछन्। यो जनआन्दोलन वा विद्रोह पहिलेको जनआन्दोलन वा विद्रोहभन्दा के अर्थमा भिन्न हुनेछ भने यसमा कांग्रेस र एमाले त हुने छैनन्। तर कांग्रेस र एमालेमा रहेका देशभक्त तथा लोकतान्त्रिक व्यक्तिहरूको यस जनआन्दोलनलाई समर्थन रहने छ। यसरी हेर्दा के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने माओवादीले नचाहंदा नचाहंदै पनि ऊ अब ज्यान फालेर आन्दोलनमा उत्रिन र आन्दोलन उठाउन बाध्य छ। यस आन्दोलनले एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई पातालमा पुर्‍याउने क्षमता राख्नेछ। गणितीय हिसाबले एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको कठपुतली सरकार मजबुतजस्तो देखिए पनि जनआन्दोलनको वा जनविद्रोहको आँधीबेहेरीले त्यसलाई बढार्ने क्षमता राख्नेछ। कुचो लगाउने क्षमता राख्नेछ।
मुलुक अब एकता, सहकार्य र सहमतिको बाटोमा जाने कि जनविद्रोह वा जनआन्दोलनको बाटोमा जाने यो कुरा एक दुई दिनकै घटनाक्रमले बताउने प्रष्ट पार्नेछ। राम्रो त यतिबेला एकता, सहमति र सहकार्यको दिशातिर बढे हुन्थ्यो। तर विदेशी शक्तिको बुई चढेको र सैनिक सर्वोच्चताको बाटोमा हिंडेको वर्तमान सरकारको बुद्धिमा बिर्को लागेकाले पनि देश दुर्घटनातिर पनि जानसक्छ। इतिहासको पुरावृत्ति नभए पनि महाभारतको पुनरावृत्ति हुन सक्छ।
राजनीतिक परिस्थितिको बदलावसंगै विवादित हुने र बदलिने कुरा अनिवार्य नै हो। तर यो वाद-विवादको प्रक्रियासागै सम्वाद अर्थात् संश्लेषण हुने कुरा अकाट्य सत्य नै हो। एकता, संघर्ष र रुपान्तरण मुख्यतः रुपान्तरण अर्थात् नयां आधारमा नयां एकताको मालेमा र प्रचण्डपथीय मान्यताअनुसार नै बैठक, गृहकार्य र अन्तरसंघर्ष वा दुई लाइन संघर्ष भइरहेकोले रूपमा तीतो, नमिठो, अस्वाभाविक र दिक्दारलाग्दो जे-जस्तो अनुभूति गरिए पनि आवेग, आक्रोश, प्रश्न र घेराबन्दीमा परिए पनि अन्ततः र सारतः परिणाम मीठो, हितकारी र क्रान्तिकारी हुनेछ। ’cause क्रान्तिविना र विद्रोहविना परितर्वन र शान्ति सम्भव नभएको विगतका अन्यत्रका अनुभवले मात्र होइन, हाम्रा आÏनै भर्खरैका अनुभवहरूले पनि पुष्टी गरिरहेको सन्दर्भमा अर्को कुनै बाटोमा जाने सम्भावना छैन र चाहेर वा नचाहेर हामीलाई बाध्यात्मक रूपमा क्रान्तिकै बाटोमा जानैपर्ने हुन्छ। जहांसम्म उपरोक्त प्रश्न, व्यंग्य, खबरदारी र आलोचना-विरोधको कुरा छ, त्यो पनि रूपमा अस्वाभाविक र अनावश्यक देखिए पनि सारमा त्यसले आलोचनात्मक द्वन्द्ववादको सत्यता र न्यायपूर्णतालाई नै प्रमाणित गर्दछ। भनिन्छ र हो पनि कि सत्य र न्यायको नै जित हुन्छ र अन्ततः त्यो कल्याणकारी, सर्वस्वीकार्य र मनमोहक पनि हुन्छ। हेर्दै जाऔं र कथाको अन्त्य यसैगरी हुनेमा आशा गरौं।
Posted by CHINTAN on अगस्ट 8, 2009 in BLOG, GUEST
2 responses to “कौरवपथमा कांग्रेस-एमाले”
अगस्ट 8, 2009 at 12:30 बेलुका
kangress uml ko kaurav path le desh ko hit gardaina bhanne kura aba sabai janata le bujhi sakeka chhan. tesaile aba aandolan ko bikalpa chhaina
अगस्ट 9, 2009 at 10:23 बिहान
yi kangerss uml bhaneka pandav hun aakhir jeet ta pandav kai hunchha ni .